Asisiye kuphela umenzi wescreen se-LED
Kukho intetho yakudala yamaTshayina: Umthengi ngukumkani, okuthetha ukuba ungoyena uxabisekileyo kuthi. Kule meko, kufuneka sizifunele ngokwethu. Umsebenzi wethu ayisiyokuvelisa kuphela iphaneli ekhokelwayo kodwa ikukubonelela ngesisombululo seprojekthi esifanelekileyo kuwe. Umzekelo, sifumene ...
Ukuhanjiswa kweZikrini zeLebhanon ye-LED
Ukuhanjiswa kweZikrini zeLebhanon ze-Lebanon ngoDisemba, sihambisa iiMiboniso ze-LED eLebhanon. Iindonga zethu ze-LED zikumgangatho ophezulu, kwaye sinikezela ngesiqinisekiso seminyaka emi-2. SinoLawulo loMgangatho olungqongqo: Sivavanya onke amanqanaba emveliso (kuvavanyo kunye nokuguga kweModyuli ye-LED-ikhabhathi ye-LED okanye ipaneli ye-LED- ii-LED ...
Ukuhanjiswa kweThailand ye-LED
Ukuhanjiswa kweThailand yokuBonisa i-LED ngoDisemba, sihambisa iiNdonga zeVidiyo ze-LED eBangkok, Thailand. Iindonga zethu ze-LED zikumgangatho ophezulu, kwaye sinikezela ngesiqinisekiso seminyaka emi-2. SinoLawulo loMgangatho olungqongqo: Sivavanya onke amanqanaba emveliso (uvavanyo kunye nokuguga kweModyuli ye-LED-ikhabhathi ye-LED okanye i-LED ...
Ukuhanjiswa koMgangatho oPhakamileyo weSlovenia Izikrini zokubonisa ze-LED
Ukuhanjiswa koMgangatho oPhakamileyo weSlovenia Izikrini zokubonisa ze-LED ngo-Novemba, sihambisa iiVidiyo ze-LED eSlovenia. Izikrini zethu zeVidiyo ze-LED zikumgangatho ophezulu, kwaye sinikezela ngesiqinisekiso seminyaka emi-2. SinoLawulo loMgangatho olungqongqo: Sivavanya onke amanyathelo emveliso (uvavanyo kunye nokuguga kweModyuli ye-LED ...
Abathengi abavela eThailand batyelele umzi-mveliso wethu weZibonisi ze-LED nge-16 ka-Okthobha
Nge-16 ka-Okthobha (Lwesibini), abathengi bethu baseThailand batyelele umzi-mveliso wethu. Bathetha kakhulu kukhenketho lomzi-mveliso; iiPaneli zethu ze-LED zokubonisa kunye nenkonzo yethu kunye nobungcali bethu baphumelele ukuqonda kwabo kunye nokuthembela. Bandizisela amashwamshwam akhethekileyo eThailand, endiwafumanayo ...
Abathengi abavela eChile batyelele umzi-mveliso wethu wePantallas LED ngo-Septemba 26
Ngomhla wama-26 kuSeptemba, abathengi bethu baseChile batyelele umzi-mveliso wethu. Baye bahlawula kakhulu ukujonga iPantallas LED Publicidad ye-Exteriores (yeNtengiso yangaphandle yeZikrini ze-LED) 10m * 3m kunye 4m * 3m. Ngexesha lokhenketho lwefektri, sixoxa ngemibuzo emininzi abayikhathaleleyo ngeenkcukacha. Emva kokufunda ...
Umthengi ovela eChile utyelele indawo yethu (yePantallas de LEDs) ngoMeyi wama-24 ukuya kuma-29
Ngo-Meyi wama-24 ukuya kowama-29, abathengi bethu baseChile batyelele umzi-mveliso wethu. Baye bahlawula kakhulu kwi-Pantallas LED (i-LED Display Screen) 6m * 4m. Bathetha kakhulu kukhenketho lomzi-mveliso; iimveliso zethu kunye nenkonzo yethu kunye nobungcali bethu kuphumelele ukuqonda kwabo kunye nentembeko. An ...
Abathengi bethu abavela e-Itali batyelele umzi-mveliso wethu nge-27 kaJuni
Nge-27 kaJulayi (ngolwesiThathu), abathengi bethu abavela e-Itali batyelele umzi-mveliso wethu. Sibonise yonke imiba enxulumene neeMonitor zethu ze-LED / iZikrini ze-LED, ezinje: ngenkqubo yemveliso indlela iSiboniso se-LED esisebenza ngayo ukulawula indlela yokufaka indlela yokugcina indlela yenkqubo-Imveliso esizenzekelayo ...